हिमानीको पहिलो गीतको भिडियोमा ७ जना टिकटक स्टारको मस्ती —
१३ कार्तिक २०७८, शनिबार ०८:१४ admin
काठमाडौं । अस्ट्रेलियामा रहेकी नव गायिका हिमानी कानले आफ्नो पहिलो डेब्यु म्युजिक भिडियो ‘जेनेरेसन’ बोलको गित सार्वजनिक गरेकी छिन्। उक्त गीतमा महेश ज्ञवालीको शब्द संगीत रहेको छ भने विशाल पौडेलले संगीत संयोजन गरेका हुन्।
गीतमा चर्चित र्यापर बुलेट फ्लोको र्याप समेत सुन्न सकिन्छ। म्युजिक भिडियोमा टिकटक स्टार उषा उप्रेती, विना राउत, श्रृष्टी खड्का, लोशिना लामिछाने , सोनिया महत , प्रिन्शिका श्रेष्ठ र अलिशा श्रेष्ठकोअभिनय रहेको छ।
सन्तोष राजबाहकले कोरियोग्राफी गरेको यस भिडियोलाई बुद्ध थापाले छायांकन गरेका हुन्। विकास दाहालले सम्पादन गरेको भिडियोलाई भिडियोलाई सशान कंडेलको निर्देशनमा तयार पारिएको हो।
आरोन कान निर्माता रहेको भिडियोलाई ब्ल्याक आइ क्रियसनको अफिसियल च्यानलबाट सार्वजनिक गरिएको हो। भिडियो हेर्नुहोस्ः
यो पनी पढ्नुहोस्ः बुवाले ५० वर्षसम्म कमाउन नसकेको सम्पत्ति आलियाले कमाइन् २ वर्षमै !
बलिउड नायिका आलिया भट्टले सन् २०१२ मा फिल्म ‘स्टुडेन्ट अफ द इयर’ बाट इन्डष्ट्रिमा कदम राखेकी थिइन् । आज उनी बलिउडकी चर्चित अभिनेत्रीमा गनिन्छिन् ।
हालै एक अन्तरवार्ताका बेला महेश भट्टले छोरी आलिया भट्टको तारिफ गरे । साथै, उनले आलिया भट्टले दुई वर्षमा जति कमाइन्, त्यति कमाउन उनलाई ५० वर्ष लागेको बताए । यसका साथै महेश भट्टले आलियाको उपलब्धिबारे पनि कुराकानी गरेका छन् ।
महेश भट्ट भन्छन्ः
आलिया भट्टको काम गर्ने तरिकाबारे महेश भट्टले ऐल म्यागजिनसँगको अन्तरवार्तामा भने, ‘ऊ आफ्नो आमा–बुवा जस्ती छैन । उभित्र एउटा आगो छ । म एक फिल्म निर्माता थिएँ, इन्डष्ट्रिको आडमा मैले काम गरेँ । हाम्रो घर फिल्मी दुनियाँका सेलिब्रिटीको पार्टीको अड्डा हुँदैनथ्यो ।
मैले बाँच्नका लागि फिल्म बनाएँ, यो कुरा आलियामा पनि आएको छ । बाँच्नका लागि तपाईंले काम गर्नुपर्छ । आलिया निकै फोकस भएर काम गर्छिन् ।’
महेश भट्टले थपे, ‘संसारमा मानिसहरुले तपाईंलाई जज गर्नेछन् । एक पर्फमर हुनका लागि तपाईं असाध्यै आत्मविश्वासी हुनुपर्छ । म ती सबैलाई असाध्यै इज्जत गर्छु, जसले फिल्म बनाउँछन् । बाटोमा आउने सबैकुरा पचाउनु पर्छ । लडेपनि उठ्नुपर्छ र पुनः हिँड्नुपर्छ ।
यो ती मानिसहरुका लागि असाध्यै महत्वपूर्ण कुरा हो जो इन्डष्ट्रिमा भर्खरै प्रवेश गरेका छन् र जवान छन् । सफलताको सिँढी चढिरहेका छन् । आज आलियाले दुई वर्षमा त्यति कमाएकी छिन् जुन मैले ५० वर्षमा मात्रै गर्न सकेको छु ।’
आलिया भट्टको कामको कुरा गर्नुपर्दा उनी रणबीरसँग फिल्म ब्रह्मास्त्रमा देखिनेछिन् । फिल्ममा आलिया, रणबीर कपुर र अमिताभ बच्चन मुख्य भूमिकामा छन् । यो फिल्मार्फत् रणबीर र आलिया पहिलो पटक सँगै काम गरिरहेको देखिनेछन् ।
२७ दिनपछि जेलबाट छुटे आर्यन, लिन पुगे शाहरूखका बडीगार्ड
मृ’त्युद’ण्डको सजाय सुनाएपछि किन कलमको निभ भाँच्छन् न्यायाधीश? कारण यस्तो
२२ मंसिर २०७८, बुधबार ०७:२० admin 0
साउथ सुपरस्टार विजयको वसन्तपुरमा ‘भागदौड’ (भिडियो)
काठमाण्डौं । दक्षिण भारतीय सुपरस्टार विजय सेतुपाथी अहिले काठमाडौँमा छन् । हिन्दी वेब–सिरिज ‘फेक’ सुटिङका लागि...
८ मंसिर २०७८, बुधबार ०९:२७ admin 0
भिडियोमा उर्फी जावेदको बोल्ड अवतार, बनिन् ट्रोल
काठमाडौं । बिग बोस ओटीटीको हिस्सा रहेकी अभिनेत्री उर्फी जावेद फेरि एकपटक आफ्नो पहिरनको कारण ट्रोल...
भिडियो हलियुड / बलियुड
३ मंसिर २०७८, शुक्रबार ११:३१ admin 0
‘कति बस्छ्यौ माइतीकै कौसीमा’ भन्दै माग्नेले उडाए दीपालाई, तर कथाले लियो अर्कै रूप
नेपाली सिनेमा उद्योगमा चलचित्र प्रचारप्रसारको लागि ‘छक्का पन्जा’ टिम सधैँ अगाडि छ । नयाँ नयाँ शैली...